Ndiri kutevera izvozvi 341 vanhu pa Twitter. Ndakaonana neTwitter ndikavabvunza kuti vakwanise 'auto-kutevera'. Izvi zvinoreva kuti kana iwe uchinditevera, ini ndinobva ndakutevera. Haisi yakanyorwa ficha kana iri mushandisi interface ... asi mumwe munhu akandiudza nezvazvo, saka ndakaikumbira uye Twitter nenyasha ndakaigonesa.
Sezvo maturusi matsva ekutaurirana uye matekinoroji achionekwa kuburikidza newebhu pane kazhinji shanduko mukushandisa kwavo izvo, pamwe, zvaisatarisirwa nevagadziri vayo. Nhasi chete ndipo pandakaziva mashandisiro andinoita Twitter seSejini Yekutsvaga, uye mashandisiro andinoita seNjini yekutsvaga nevamwe. Zvinotaridza kwandiri kuti Twitter inogona kupedzisira yatora chidimbu chakati kubva kune humwe hunyanzvi - pamwe muenzaniso wedunhu ChaCha, iyo yekutsvaga-inotsvaga injini yekutsvaga.
Pandakabvunza nezve online online mupepeti, vanhu vaviri vakabva vapindura na Aviary. Pandakabvunza a Slideshare imwe nzira (vanga vari pasi zvakanyanya nguva pfupi yadarika), ini ndakagamuchira isingasviki gumi nemhinduro. Uye, ini ndakakwanisa kupindura uye 'kunyatso-tanga' mubvunzo wangu kuti ndinyatso kuwana mhinduro kwayo. With Twitter, Ndinogona kunatsiridza kutsvaga kwangu, kuwana maonero, uye mazano nekukurumidza sezvandinogona kubaya pane mashoma mhedzisiro mu Google.